फस्टाउँदै अवैध स्वास्थ्य क्लिनिक, शिशुको ज्यान गयो, आमा आइसियुमा | Nagarik News - Nepal Republic Media
फस्टाउँदै अवैध स्वास्थ्य क्लिनिक, शिशुको ज्यान गयो, आमा आइसियुमा
लहान - मिर्चैया नगरपालिका–३ राघोपुरकी शोभादेवी चौधरीलोरी व्यथा लागेपछि परिवारका सदस्यले एम्बुलेन्समा लहान–३ अस्पताल चोकस्थित सुनिता श्रेष्ठको निजी क्लिनिकमा लगे। तीन छोरीकी आमा शोभा मिर्चैयामा अस्पताल भए पनि लहानमा भरपर्दो उपचारको आसमा आएकी थिइन्। उनले पहिला पनि नर्सिङ निरीक्षक श्रेष्ठसँग जाँच गराएकी थिइन्। त्यसैले उनी श्रेष्ठकै क्लिनिकमा आएकी हुन्।
बच्चाको घाँटीमा बेरिएको साल निकाल्न ‘सक्सन मेसिन’ प्रयोग गर्दा थिँचिएर मृत्यु भएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै लिल्साले बताइन्। साल चुँडिएको तथा पाठेघरमा समेत धक्का पुगेर उच्च रक्तश्रावले शोभाको अवस्था पनि नाजुक बनेको उनले बताइन्। घटनाबारे तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा फोन गरी जानकारी गराएको लिल्साले बताइन्। जानकारी पाएपछि आएको डिएसपी भेषराज रिजालसहितको प्रहरी टोलीले शोभालाई उद्धार गरेर थप उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल लग्यो। शोभालाई नोबेल अस्पतालको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
मेरिगोल्ड हेल्थ पोलिक्लिनिकले गैरकानुनी रूपमा प्रसूति सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचारमा लापरबाही गर्दा शिशुको ज्यान गएको यो पहिलो घटना भने होइन।
प्रहरीले घटना दर्ता गरी कानुनी कारबाही गर्नुको साटो मिलापत्र गराइदियो। लहानका तत्कालीन सई डेकेन्द्र कार्कीले २०७५ माघ ११ गते यस घटनाका पीडित र डाक्टरबीच मिलापत्रको लिखित सम्झौता गराइदिएका थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो बेथितिका कारण जोखिममा पर्दै गएको मानव जीवनका यी दुई घटना प्रतिनिधि मात्र हुन्। नियामक निकायको फितलो नियमनको फाइदा उठाउँदै यहाँका निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिएका छन्।
ज्यानै जाने घटनापछि निजी स्वास्थ्य संस्थाले पीडितपक्षलाई कानुनी कारबाहीबाट रोक्न आर्थिक लेनदेन गरेर मिलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ। आर्थिक लेनदेनका
कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाको लापरबाही ढाकछोप हुँदै आएको छ। आफ्नो गल्ती लुकाउन निजी स्वास्थ्य संस्थाले घटनालगत्तै पीडित र उजुरी सुन्ने निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मिलापत्र गराउने स्रोत बताउँछ। मिर्चैया बजारमा सञ्चालित मिर्चैया नर्सिङ होममा कार्यरत डा. शम्भुकुमार यादव असारमा पक्राउ परे। डा. यादवलाई इलाजसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत सिरहाबाट म्याद थप गराएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरायो।
असार १८ गते जाँचका लागि मिर्चैया नर्सिङ होम पुगेकी सिरहा नगरपालिका–१०, गुलरियाकी एक महिलासँग १२ हजार रुपैयाँ लिएर २३ गते लिंग परीक्षणपछि गर्भपतन गराएको आरोप यादवमाथि थियो। गर्भपतनपछि महिलाको रक्तश्राव नरोकिएका कारण घटना बाहिर आएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि डा. यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। मुद्दाका प्रतिवादी डा. यादव र डा. वीरेन्द्र चौधरी भर्खरै जिल्ला अदालत सिरहाको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन्।
मेरिगोल्ड हेल्थ पोलिक्लिनिकबाट पीडित पक्षले कानुनी कारबाहीमार्फत निसाफ खोज्ने बताएका छन्। लिल्साले भनिन्, ‘चिकित्सकले लापरबाही गर्दा बच्चाको ज्यान गयो, आमा जीवनमरणको दोसाँधमा छिन्। उपचारका नाममा खोलिएका ज्यानमारा संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्छ। हामी कानुनी कारबाहीका पक्षमा छौं। ’ घटनापछि मेरिगोल्ड हेल्थपोक्लिनिक सोमबारबाट बन्द छ। यसका सञ्चालक, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग बयान लिने काम भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले बताए। पीडित पक्षबाट जाहेरी आए दर्ता गरेर कानुनबमोजिमको कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०८:२५ आइतबार
मिर्चैया_नगरपालिका अवैध_स्वास्थ्य_क्लिनिक आइसियुमा